Global Voices teny Malagasy » Tetikasa Mpiaramiasa: Fitaovana Teknika Vaovao Hanarahanao Maso ireo Mpanara-maso Anao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Septambra 2016 2:54 GMT 1	 · Mpanoratra Guest Contributor Nandika avylavitra
Sokajy: Fiainana Manokana, Indostria, Mediam-bahoaka, Tetikasa mpiaramiasa, GV Mpisolovava
Nosoratan'i Fieke Jansen  sy Maria Xynou  avy ao amin'ny Tactical Technology Collective.
Rehefa mieritreritra momba ny fanarahamaso isika, dia indraindray lasa manadino fa marobe amin'ireo fihetsika ataontsika andavanandro, toy ny mijery vaovao ety anaty aterineto, no angonina sy raketina ho aminà tanjona ara-barotra. Mazàna izany no tsy fantatsika akory ary atao tsy nisy ny fanekentsika, sady ampiasaina ho toy ny loharanon-drakitra ho an'ireo mpandalina angon-drakitra sy ny indostrian'ny rakitra . Manjavozavo ity indostria ity, satria tsy mazava amintsika hoe iza ary firy ireo orinasa mijirika antsika rehefa miditra tranonkala isika, fomba ahoana no itantanany ny angon-drakitra momba antsika ary ifampizaràny amin'iza.
Tactical Technology Collective  dia miasa mitrandraka ary mijery ireo indostrian'ny rakitra amin'ny alàlan'ny Trackography , rindrambaiko misokatra izay mampibaribary hoe iza no manara-maso antsika ary aiza ny angon-drakitra momba antsika no mandeha rehefa miditra aminà tranonkalam-baovao isika.
Rehefa mandeha mitety ny aterineto ny angon-drakitra momba antsika, ilay tambajotra iraisampirenen'ireo tambajotra , dia mifindrafindra mandalo lohamilina marobe manerana ny tany. Eo ampitsidihana tranonkala iray, dia mandalo ao amin'ireo lohamilin'ilay tranonkala sy ny an'ireo mpijirika, toy ireo mpandefa dokambarotra, ny angon-drakitra momba antsika.
Asehon'ny Trackography fa fihetsika politika kokoa ny famakiana vaovao ety anaty aterineto fa tsy araka ny iheverantsika azy. Araka ny andrana iray vitan'ny Trackography , rehefa miditra amin'ireo tranonkalam-baovao nasionaly roa ireo olontsotra ao Okraina, dia ny pravda.com.ua sy vesti.ua, mandalo amin'ny fotodrafitrasan'ny tambajotra ao Rosia ny angon-drakitra momba azy ireo, ary koa orinasa mpijirika isankarazany no manaramaso azy, iray amin'ireny ny Yandex , manana ny foibeny ao Rosia. Efa fantatra ny fisian'ny fihenjanana politika eo amin'i Rosia sy Okraina, ka mety hampametra-panontaniana ihany ny fijeren'ireo orinasa Rosiana mpijirika ny mombamomba ireo Okrainiana ho amin'ny resaka ara-barotra – indrindra fa rehefa injay ilay orinasa miditra amin'ny fijerena sy fizaràna izany amin'ny hafa , saingy mbola tsy mazava ny fomba fitahirizany ireo angon-drakitra, ny fomba ampiasàna ireny mombamomba ny olona ireny ary ny hoe iza no manana fahafahana mijery azy ireny.
Tsy ireny toerana jeopolitika mifanohitra ireny ihany no resahana amin'ilay politikan'ny angon-drakitra — fa afaka mifaningotra ihany koa amin'ny resaka fiarovana araka ny lalàna ny fiainana manokan'ny tena ihany koa io. Raha mety ho afaka miditra aminà vaovao ety anaty aterineto isika any amin'ireo firenena izay fantatra amin'ny fanànany lalàna henjana miaro ny fiainana manokan'ny tena, dia mety hitety be ireo firenena tsy manana izany kosa ny mombamomba antsika. Asehon'ny iray amin'ireo andrana nataon'ny Trackography  fa rehefa miditra amin'ireo tranonkalam-baovao nasionaly ao Alemàma ny olona, dia mandalo amin'ireo fotodrafitrasan'ny tambajotra any India ireo angon-drakitra momba azy, izay tsy manana lalàna miaro ny fiainana manokana aloha amin'izao fotoana izao. Araka izany, mampametra-panontaniana ny fomba ahafahana miaro tsara araka ny tokony ho izy ny angon-drakitra momba antsika, indrindra fantatra fa mila mandalo aminà firenena any ivelany ny fidirana amin'ireo tranonkala isankarazany, firenena izay mety manana karazana fiarovana samihafa – na tsy misy mihitsy koa.
Ny ankamaroan'ireo tranonkala idirantsika dia ahitàna sary nasisika sy ‘code’ izay manangona ary mandefa torohay momba antsika mankany amin'ny lohamilin'ireo orinasa. Ireny orinasa ireny dia“mpanaramaso ho an'ny hafa”  izay manangona ny adiresy IP-ntsika sy mijery izay ataontsika ety anaty serasera amin'ny alàlan'ny fampiasàna ‘cookies’ ao anaty fitety ary teknolojia hafa. Matetika, sesehan-dry zareo teknolojia fanarahamaso ihany koa ao amin'ny fitetintsika ao, izay ahafahan-dry zareo mijery ireo tranonkala rehetra tsidihantsika tsy tapaka. Ireny rehetra ireny dia ahafahan-dry zareo manao sarintany momba izay zava-mahaliana antsika ary mamorona ny mombamomba  antsika.
Asehon'ny Trackography hoe iza tsara ireo orinasa manara-maso antsika isak'izay miditra aminà tranonkalam-baovao iray isika. Ao anatin'ny firenena 37 manerana ny tany, nasehon'ny andrana nataon'ny Trackography  fa Google, Facebook sy Twitter no tena manara-maso be ireo mpamaky vaovao ety anaty aterineto.
Na izany aza , tsy mbola mazava ny fomba fikirakiran'ireny orinasa ireny ny angon-drakitra nangoniny. Ny fandinihana akaiky ny fepetra fampiasàna  ny sasany amin'ireo orinasa tena mpanaramaso erantany dia mampiseho fa ny ankamaroan-dry zareo ireny no manangona torohay manokana momba ny tena, izay avoakany ho an'ny hafa, tsy misy fandraràna mazava sy mivantana momba izay ho fampiasan-dry zareo izany aminà tanjona tsy voafaritra. Mendrika homarihana ihany koa fa ny ankamaroan'ireny orinasa ireny no milaza ao anatin'ny fepetra momba ny fampiasàna azy  fa tazonin-dry zareo ho azy ny angon-drakitra azony, saingy tsy lazainy hoe mandra-pahoviana.
Raha toy ny tsy dia mampaninona loatra no fandrenesana izany, aoka tsy ho adinontsika fa ny fakàna ny mombamomba anao dia fon'ny fanarahamaso  ety anaty aterineto. Afaka atambatra aminà angon-drakitra hafa nangonina avy amin'ireo loharano tety anaty aterineto sy ivelany, mba hananganana ny mombamomba ny tenanao, ireo angon-drakitra rehetra voaangona tety anaty serasera. Kanefa, tsy ho vitantsika ny hifehy hoe karazana mombamomba antsika toy inona no noforonina, na hoe mitombina ve izy ireny, ary iza no nivarotana azy.
Noforonin'ny Tactical Tech ny Trackography  mba hampitomboana ny mangarahara momba ny indostrian'ny fanarahamaso manerantany ary ho ampiasaina ho toy ny fitaovana fikarohana sy fisoloana vava. Na iza na iza dia afaka mandray anjara amin'ny Trackography  amin'ny fampiasàna ny rindrambaikony  sy/na amin'ny fandraisana anjara ao amin'ny lisitr'ireo trankoalam-baovao nataony  ary ny fandalinana ireo fepetra fampiasàna tranonkala . Ampio izahay hanara-maso ireo mpanara-maso ary hampitombo ny mangarahara momba ny indostrian'ny rakitra manerantany!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/09/09/88215/
 indostrian'ny rakitra: https://myshadow.org/data-brokers
 tambajotra iraisampirenen'ireo tambajotra: https://myshadow.org/how-do-mobile-phones-and-internet-work
 andrana iray vitan'ny Trackography: https://myshadow.org/trackography-project-highlights
 miditra amin'ny fijerena sy fizaràna izany amin'ny hafa: https://myshadow.org/trackography-meet-the-trackers
 mandray anjara amin'ny Trackography: https://myshadow.org/trackography-help-us-track-trackers
 lisitr'ireo trankoalam-baovao nataony: https://github.com/vecna/trackmap/tree/master/unverified_media_list